Ko Yoo's စာမျက်နာ - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
Myanmar Share on Facebook
ဘလော့ ပိုစ်များ (50)Discussions (34)အဖွဲ့ များ (3)ဓာတ်ပုံများPhoto Albumsဗီဒီယိုများ Ko Yoo's Apps (1)
Ko Yoo's Likes Ko Yoo's သူငယ်ချင်းများ
အားလုံးကြည်ရန် Ko Yoo's Groups
မြန်မာချစ်သူ ကဗျာချစ်သူ …
Ko Yoo's Discussions
ကန်ရေပြင်ကို မှန်ခဲ့လေသော ခဲတစ်လုံး။
၁။ပြောလာသော အမေ့နှုတ်ထွက်စကားကြောင့် မြင်းမိုရ်ရွှေတောင် ပြိုကျအံ့ထင်မိပါသည်။ ဖခင် ကွယ်လွန်ပြီးချိန် ကတည်းက သည်သမီးတွေအတွက် လောကဓံဟူသမျှ ရင်စီးခံကာ ပျိုးထောင်လာခဲ့သော သည်သမီးတွေကို အမေ လက်လွတ်စမ်းသပ်…ContinueTags: တို, ရသ၀တ္ထု Started Jun 13, 2012 Dealing ကောင်းတိုင်း လူကောင်းဖြစ်နိုင်မလား။(ဆေးလောကအတွေ့အကြုံများ-၁၁)
ရှားတော့ ရှားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်း တကယ်ရှိပါတယ် လို့ပဲ ပြောပါရစေ။၁အဲသည်နေ့မှာ ကျွန်တော်ကတော့ သေဆုံးမှုကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး လက်မှတ် ထိုးပါတယ်။ သေစာရင်းစာအုပ်မှာ ဖြည့်ရင်း လူနာစောင့်ရဲ့ ဒေါမနဿကို…Continue Started this discussion. Last reply by Ko Yoo Aug 22, 2011. Dealingကောင်းဖို့ လိုပါတယ်(ဆေးလောကအတွေ့အကြုံများ-၁၀)
Dealing ဆိုတာ ဘာလဲ။Dealing သိပ်ကောင်းတာပဲ၊ Dealing မှမကောင်းတာ ဆိုသော စကားစုလေးတွေ မကြာမကြာ ကြားရပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့သော ကျွန်တော့်အဖို့ တော်တော် စဉ်းစားရသော စကားလုံး ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်ရှာကြည့်တော့မှ…Continue Started Aug 16, 2011 ဆိုလိုတာ ဒါမဟုတ်ပေဘူး။
ကျွန်တော်လည်း သည်ခရီးကို ခဏဆိုပေမဲ့လို့ နှစ်ပတ်ကျော်ကြာခဲ့ပါတယ်။ ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကလည်း နှမြောဖို့ အကောင်းသား။အဲ အခုကတော့ ဆေးလောကနဲ့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်တာလေးတွေ ပြောကြရအောင်။ တစ်နေ့က အငှားကားစီးတော့…Continue Started Aug 14, 2011 အားလုံးကြည်ရန်
Ko Yoo တွင် လက်ဆောင် ပေးခံထားခြင်းမရှိသေးပါ။
Ko Yoo's စာမျက်နာ
ဘလော့ပို့(စ်)ရေးသားသူ Ko Yooဘယ်ကစပြီး ပြောင်းကြမှာလဲ - ၅ (ခြစားခြင်း) အောက်ခြေအဆင့် အဂတိ လိုက်စားမှု နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက သတိ ပေးတာသည်အပတ်ထုတ် ဂျာနယ်တွေမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ သည်အနာရောဂါဟာ ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုမှ ရမဲ့ ရောဂါလား။ကျွန်တော်တို့တွေ တွေးမိပါတယ်။ ၁။နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၄၀ကျော် လုပ်သွားခဲ့တဲ့ အရာရှိကြီး တစ်ယောက်က သတင်းဌာန တစ်ခုနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ထောက်ပြသွားခဲ့တဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ် ပြဿနာကို တွေးမိပါတယ်။ အဆင့်တိုင်းမှာ ရောက်လာကြတဲ့ မလျော်ညီတဲ့မိုးကျရွှေကိုယ်တွေရဲ့ ပြဿနာကြောင့် ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ အဆင့်အလိုက် အခက်အခဲတွေ…ထပ်ပို၍ကြည်ရန်Aug 21, 2012 0
sumyat commented on Ko Yoo's blog post အဖေသို့...။"အဖေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးမရှိတော့တဲ့အဖေကိုလွမ်းပြီးမျက်ရည်တောင်ကျမိပါတယ်"Jun 20, 2012sumyat liked Ko Yoo's blog post အဖေသို့...။Jun 20, 2012လေပြေ commented on Ko Yoo's blog post အဖေသို့...။"အဖေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့စာလေးကိုဖတ်ခွင့်ရတဲ့တွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို.......အကိုလည်းဆန္ဒနဲ့ဘ၀ထပ်တူကျပါစေလိုဆုတောင်းရင်း..
အားပေးသွားပါတယ်......."Jun 19, 2012thee su nyo liked Ko Yoo's blog post အဖေသို့...။Jun 19, 2012ဘလော့ပို့(စ်)ရေးသားသူ Ko Yooအဖေသို့...။သည်နေ့ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ရောက်လာတော့ အဖေက ညီအငယ်ဆုံးအတွက် တစ်မြို့တစ်ရွာကို သွားနေခဲ့တယ်။ တိုက်ခန်းလေးက စားပွဲပေါ်မှာ အမေ တင်ထားခဲ့တဲ့ အဖေ့ဆေးစစ်ချက် မှတ်တမ်းတွေ ကျွန်တော် မြင်တွေ့ရချိန်မှာ ကျွန်တော်ရင်မှာ မချိခဲ့ပါဘူးအဖေ။ တကယ်တမ်းလည်း အဖေ ကျန်းမာရေးကိစ္စကြောင့် ကျွန်တော် အဖေ့တို့နဲ့နီးစပ်ရာ သည်ရာထူးကို ယူပြီး ပြောင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ အဖေ့အပေါ် တာဝန်အပြည့်အ၀ မကျေနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဖေ။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့၊ ကျွန်တော်ခံယူတဲ့ အလုပ် ဆိုတာက နံပါတ်(၁) နေရာမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး အဖေ့ဆီ တစ်ခါတလေ သုံးရက်မှ တစ်ကြိမ်…ထပ်ပို၍ကြည်ရန်Jun 19, 2012 3
ဆွေးနွေးချက်ရေးသားသူ Ko Yooကန်ရေပြင်ကို မှန်ခဲ့လေသော ခဲတစ်လုံး။၁။ပြောလာသော အမေ့နှုတ်ထွက်စကားကြောင့် မြင်းမိုရ်ရွှေတောင် ပြိုကျအံ့ထင်မိပါသည်။ ဖခင် ကွယ်လွန်ပြီးချိန် ကတည်းက သည်သမီးတွေအတွက် လောကဓံဟူသမျှ ရင်စီးခံကာ ပျိုးထောင်လာခဲ့သော သည်သမီးတွေကို အမေ လက်လွတ်စမ်းသပ် ပြီလား။ ငယ်နုစဉ်အရွယ်ကတည်းက အဖေကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ဘွဲ့တစ်ခု လောက်လောက်လားလား ရသည်အထိ အမေကိုယ်တည်း ရုန်းကန်ကျွေးမွေး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သလို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးချင်သော ၀သီအရ ဆယ်တန်းအောင်သော်လည်း တက္ကသိုလ် ဆက်မတက်တော့ဘဲ ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ကာ အလုပ်ဝင်လုပ်နေခဲ့မိပါသည်။ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ…ထပ်ပို၍ကြည်ရန်Jun 14, 2012 0
+◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ commented on Ko Yoo's blog post ရင်နင့်မိသော အဖြစ်များ(၉)။( ကျေးလက်တောရွာက ရောဂါကုထုံးနဲ့ တရားစီရင်ချက်တွေအကြောင်း)"မှန်လိုက်တာ.........ဆရာရယ်..........ဖတ်ပြီးးးးတော့ မှတ်သားသွားပါတယ်......"May 9, 2012ဘလော့ပို့(စ်)ရေးသားသူ Ko Yooရင်နင့်မိသော အဖြစ်များ(၉)။( ကျေးလက်တောရွာက ရောဂါကုထုံးနဲ့ တရားစီရင်ချက်တွေအကြောင်း)၁။သည်နေ့ ညမှာပဲ ဆရာကြီး တက်တိုးရဲ့ ဘာသာပြန် ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ခါးကုန်းကြီးဝတ္ထုကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြန်ဖတ်မိပါတယ်။ပြင်သစ် စာရေးဆရာကြီး Victor Hugoရဲ့ The Hunchback of Not-re Dameကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Romantic ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုနဲ့ သည်ခေတ်က သာသနာပိုင်တွေ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ ခေတ်တစ်ခုရဲ့ အခြေအနေကို ထင်ဟပ်ပြီး ဘာသာရေးဆရာတွေ ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်မှုအကြားက နှစ်လိုဖွယ်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်လို့လဲ ကြုံကြိုက်တိုင်းပြန်ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ…ထပ်ပို၍ကြည်ရန်May 9, 2012 1
+◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ commented on Ko Yoo's blog post မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း နှင့် ပင်လယ်တို့ ဆုံမှတ်မှာ။"အင်းးးးးးးးးဖတ်ရျတာ ဘယ်သူ့ကို သနားလို့ ဘယ်သူ့ကို နားလည်ခိုင်းပေးရမလဲ..........နှစ်ယောက်လုံးမှန်နေတယ်လေ.."May 6, 2012ကြာဖြူနွယ် commented on Ko Yoo's blog post မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း နှင့် ပင်လယ်တို့ ဆုံမှတ်မှာ။"ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ဇာတ်သိမ်းတာမြန်လိုက်တာ --ဆက်ရန်ရှိသေးလားဟင်--"May 5, 2012ဘလော့ပို့(စ်)ရေးသားသူ Ko Yooမိုးကုပ်စက်ဝိုင်း နှင့် ပင်လယ်တို့ ဆုံမှတ်မှာ။၁။စိမ်းပြာလဲ့သော ရေအလျဉ်သည် နီညိုညိုရွှံ့စပ်သော ကမ်း၏အနားသပ်တွင် ဆုံ၏။ လှိုင်းတံပိုးတို့ လိပ်ကာလိပ်ကာကမ်းခြေဖက်သို့ တက်လာလိုက်၊ ပြန်ကျသွားလိုက်နှင့်။ အနောက်ဖက် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းသို့ ရှင်နေမင်းမှေးတင်ပြီ။မိုးကောင်းကင်နှင့် ပင်လယ်ပြင်တို့သည် ဟိုးရှေ့တစ်နေရာမှာ ဆုံ ကြတော့မယောင် ထိစပ်လျက်။ ရောင်ရှိန်ပြင်းသော နေမင်းသည် တဖြည်းဖြည်း အရောင်အ၀ါလျော့လာကာနီမောင်းသော အလုံးအ၀ိုင်းသဏ္ဍာန်ဖြင့် ပင်လယ်တွင်းသို့ နိမ့်ဆင်းမည့်ဟန်ပြင်သည်။“ကိုယ့်ချစ်သူက သည်အချိန်ဆိုတော့လည်း လှသားကွနော်” လို့ ကလူကြည်စယ်လာသော ချစ်သူ…ထပ်ပို၍ကြည်ရန်May 5, 2012 2
ဘလော့ပို့(စ်)ရေးသားသူ Ko Yooဆေးလောကနဲ့ စပ်မိစပ်ရာ-၄( ဖြစ်စေချင်တာ၊ ဖြစ်ဖို့သင့်တာ) ဆေးရုံထဲံ ၀င်တာနဲ့ပဲ ဖော်ရွေပျူငှာတဲ့ ဆင်တူ ယူနီဖောင်းလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်က ဦးလေးညွတ်၊ဒူးလေးညွတ်ပြီး မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ဒါ ကျွန်တော် လူနာကြည့်ဖို့ သွားတာနော်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဧည့်သည်အနေနဲ့ သွားတာ။ ပြီးတော့ “ဘာများကူညီရ ပါမလဲ ရှင် ”လို့ ပျူငှာသောမျက်နှာထားနဲ့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်လူနာ နာမည်နဲ့ အသက်၊ နေရပ် လိပ်စာပြောလိုက်တာနဲ့ Dataကို computer ထဲ ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ သည်လူနာ ဘယ်အဆောင်၊ ကုတင် နံပါတ် ဘယ်လောက်မှာ ဆိုတာချက်ချင်း သည်ကလေးမလေးတွေ…ထပ်ပို၍ကြည်ရန်Apr 15, 2012 0
DeafOrange commented on Ko Yoo's blog post လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်ကြရာမှာ။"
စိတ်ဝင်စားမိပါသည် ... မျှဝေပါဦးမည်"Apr 6, 2012DeafOrange liked Ko Yoo's blog post လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်ကြရာမှာ။Apr 6, 2012ဘလော့ပို့(စ်)ရေးသားသူ Ko Yooလူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်ကြရာမှာ။ သည်နေ့က ညီငယ်တစ်ယောက်နှင့် စကားပြောဖြစ်ပါသည်။သူက ငယ်လွန်းတော့ ရံဖန်ရံခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု လွန်ကဲသဖြင့် လည်း ခါတလေ ကိုယ်ကပင် စိတ်ဆိုးရခက်ခက် ဖြစ်ပါသေးသည်။အမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ရော သူပါ သည် ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ စေတနာ့ ၀န်ထမ်း ကူညီနေကြသူတွေ။ကိုယ်ကတော့ ယခင်ကတည်းက တာဝန်ယူထား သော ဆရာဝန်ကြီး အသက်အရွယ်အရ ညရေးညတာ အခက်အခဲရှိမည် ထင်သဖြင့် ဆရာကြီးကို ခွင့်တောင်းပြီး ကူညီခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ဘာပဲလုပ်လုပ် ဆရာကြီးဆီ ခွင့်တောင်းလေ့ရှိသည်။ အကြောင်းကြား လေ့ရှိပါသည်။ ပြီးတော့ Reason and…ထပ်ပို၍ကြည်ရန်Apr 5, 2012 1
Ko Yoo's ဘလော့ ပိုစ်
ဘယ်ကစပြီး ပြောင်းကြမှာလဲ - ၅ (ခြစားခြင်း)
အောက်ခြေအဆင့် အဂတိ လိုက်စားမှု နေရာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက သတိ ပေးတာ
သည်အပတ်ထုတ် ဂျာနယ်တွေမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ သည်အနာရောဂါဟာ ဆေးမြီးတိုနဲ့ ကုမှ ရမဲ့ ရောဂါလား။
နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၄၀ကျော် လုပ်သွားခဲ့တဲ့ အရာရှိကြီး တစ်ယောက်က သတင်းဌာန တစ်ခုနဲ့ တွေ့ဆုံရာ
မှာ ထောက်ပြသွားခဲ့တဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ် ပြဿနာကို… Continue အဖေသို့...။
Posted on June 19, 2012 at 3:14am3Comments
သည်နေ့ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ရောက်လာတော့ အဖေက ညီအငယ်ဆုံးအတွက် တစ်မြို့တစ်ရွာကို သွားနေခဲ့တယ်။ တိုက်ခန်းလေးက စားပွဲပေါ်မှာ အမေ တင်ထားခဲ့တဲ့ အဖေ့ဆေးစစ်ချက် မှတ်တမ်းတွေ ကျွန်တော် မြင်တွေ့ရချိန်မှာ ကျွန်တော်ရင်မှာ မချိခဲ့ပါဘူးအဖေ။
တကယ်တမ်းလည်း အဖေ ကျန်းမာရေးကိစ္စကြောင့် ကျွန်တော် အဖေ့တို့နဲ့နီးစပ်ရာ သည်ရာထူးကို ယူပြီး ပြောင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ အဖေ့အပေါ် တာဝန်အပြည့်အ၀ မကျေနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဖေ။
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့၊ ကျွန်တော်ခံယူတဲ့ အလုပ် ဆိုတာက နံပါတ်(၁) နေရာမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး အဖေ့ဆီ တစ်ခါတလေ… Continue ရင်နင့်မိသော အဖြစ်များ(၉)။( ကျေးလက်တောရွာက ရောဂါကုထုံးနဲ့ တရားစီရင်ချက်တွေအကြောင်း)
Posted on May 9, 2012 at 3:42am 1 Comment
၁။သည်နေ့ ညမှာပဲ ဆရာကြီး တက်တိုးရဲ့ ဘာသာပြန် ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ခါးကုန်းကြီးဝတ္ထုကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြန်ဖတ်မိပါတယ်။
ပြင်သစ် စာရေးဆရာကြီး Victor Hugoရဲ့ The Hunchback of Not-re Dameကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Romantic ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုနဲ့ သည်ခေတ်က သာသနာပိုင်တွေ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ ခေတ်တစ်ခုရဲ့ အခြေအနေကို ထင်ဟပ်ပြီ
း ဘာသာရေးဆရာတွေ ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန်မှုအကြားက နှစ်လိုဖွယ်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ရာ… Continue မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း နှင့် ပင်လယ်တို့ ဆုံမှတ်မှာ။
Posted on May 5, 2012 at 5:00pm2Comments
၁။စိမ်းပြာလဲ့သော ရေအလျဉ်သည် နီညိုညိုရွှံ့စပ်သော ကမ်း၏အနားသပ်တွင် ဆုံ၏။ လှိုင်းတံပိုးတို့ လိပ်ကာလိပ်ကာ
ကမ်းခြေဖက်သို့ တက်လာလိုက်၊ ပြန်ကျသွားလိုက်နှင့်။ အနောက်ဖက် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းသို့ ရှင်နေမင်းမှေးတင်ပြီ။
မိုးကောင်းကင်နှင့် ပင်လယ်ပြင်တို့သည် ဟိုးရှေ့တစ်နေရာမှာ ဆုံ ကြတော့မယောင် ထိစပ်လျက်။ ရောင်ရှိန်ပြင်း
သော နေမင်းသည် တဖြည်းဖြည်း အရောင်အ၀ါလျော့လာကာနီမောင်းသော အလုံးအ၀ိုင်းသဏ္ဍာန်ဖြင့် ပင်လယ်တွင်း
သို့… Continue ဘလော့ပိုစ်တင်ရန်
အားလုံးကြည်ရန် Comment Wall (4 comments)
At 2:08am on January 4, 2012, Admin၀ိဝိ said… သူငယ်ချင်းရေ
ယနေ့မှစ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းပြီးပြည့်စုံပြီး
At 7:22pm on July 22, 2011, မင်းကုသ said… ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ ကျွန်တော်လဲ အဲ့လို စကားဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတာလေးရှိပါတယ် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့အ ကောင့်လေးကိုအပ်ပေးပါနော် minkhuta@gmail.com ကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် At 6:20pm on July 10, 2011, မင်းကုသ said… လာလည်သွားပါတယ်နော် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ အစစအရာရာအဆင်ပြေချော့မွေ့ပါစေလိုဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ At 11:59am on April 16, 2011, လွမ်းမေဦး said… အတက်နေ့မှာပိတောက်ပန်းနဲ့ရေလောင်းလိုက်မယ်နော် မှတ်ချက်မရှိသေးပါ။